Music Archives ⋆ Page 12 of 87 ⋆ Popular
''ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒုတိယအခွေကို အမ်တီဗီမထွက်တော့ဘဲ အခု တတိယအခွေကို စီစဉ်ဖြစ်တာပါ။ အားလုံးလည်း သိတဲ့အတိုင်း ကျွန်တော်က ဒီဘက်ပိုင်းမှာ အခက်အခဲ လေးတွေအနည်းငယ် ရှိခဲ့တော့....
''အခွေတစ်ခွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာ တကယ်မလွယ်တာ ပါ။ နားထောင်လိုက်ရင်တော့ ၃ မိနစ်၊ ၄ မိနစ်စာ လေးပါ။ တအားမြန်တယ်။ တကယ်တမ်းလုပ်ရတဲ့ အချိန်မှာ ငွေရော၊ အချိန်ရော၊ လူရော တအားကိုပင် ပန်းပါတယ်။ အကုန်လုံးပေါ့...
''သီချင်းက စုထားတာ ၃ ပုဒ်၊ ၄ ပုဒ်လောက်ရှိနေပြီ။ ကိုယ်တိုင်လည်း ကျွန်တော်ရေးရေးထားတာလေးတွေရှိတယ်။ ကိုကောင်းနဲ့ တစ်ပုဒ်ကတော့ အခွေထဲမှာပါသွားတာပေါ့နော်။ ကျွန်တော့်ဘာသာ ကျွန်တော်လည်း Page မှာ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်တင်ဖူးတယ်။ အခုက....
''အခု ညီမသီချင်းလေးတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ သီချင်းတွေကိုဆရာတွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးတော့ ဆက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ သီချင်းတွေကတော....
ဒုတိယမြောက် တစ်ကိုယ်တော်ခွေထွက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ ပိုးမီ
အဲဒီတစ်ကိုယ်တော်ခွေအတွက် ပြင်ဆင် နေတဲ့အကြောင်းကို ပိုးမီက 'ပထမအခွေထဲမှာ သီချင်းအေးအေး လေးတွေ အများကြီးပါတယ်။ ဒုတိယအခွေမှာ နည်းနည်း Rock ဆန်တဲ့ သီချင်းပုံစံမျိုးလေးတွေကိုဆိုဖို့ . . .
'Storm' ထဲမှာပါတဲ့ စာသားအကြောင်းအရာတွေက ''Positive ဖြစ်တာတွေပေါ့နော်။ နိမိတ်ကောင်းတာတွေလို့ အလွယ်ပြောရမှာပေါ့။ အသည်းကွဲတယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒါမျိုးတွေ မရှိတော့ဘူး။ ဘဝအသစ်စမယ်ဆိုတဲ့အရသာမျိုးကို သွားတယ် လေ။ ပြီးတော့ ဒီဂီတအမျိုးအစားရဲ့အားသာချက်ကိုက . . .
''ပြောရင်တော့ စိတ်မဆိုးပါနဲ့ပေါ့။ အိမ်ကမိဘတွေကိုလေ။ အဲဒီသီချင်းက ငယ်လေးရဲ့အဖြစ်အပျက် တစ်ရာရာခိုင်နှုန်းပါပါ တယ်'' လို့ ငဲငယ်လေးကပြောပါတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း ...
''အဓိကကတော့ အသည်းကွဲ သီချင်းဆိုတိုင်း အသည်းကွဲတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကေကေလည်း အသည်းမကွဲဖူးပါဘူး။ ဒါ အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြ တာပါ။ အဲဒီ 'ကျွန်မ' သီချင်းဆိုတုန်းကဆိုရင်....
အဆိုတော် အယောက်တိုင်း၊ အယောက်တိုင်းက သူတို့ကို ချစ်ခင်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ နောက်တစ်ခါကျတော့ ဒီသီချင်းလေးမှာ ပုထုဇဉ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်က လူသားအားလုံး နဲ့ဆိုင်တယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်....